Black Magic: ဖား၊ ကြွက် အရှင် မြိုတဲ. တရုတ်
ဖား၊ ကြွက် အရှင် မြိုတဲ. တရုတ်
Posted by Black Magic | Posted in ထူးထူးခြားခြား | Posted on 11:36 PM
ဇန်န၀ါရီ ၁၆ ရက် ၂၀၁၄
တရုတ်ပြည် အရှေ့တောင် ဘက် ပိုင်းက Yan Dingcai ဆိုသူ အသက် ၄၀ အရွယ် အမျိုးသား တစ်ဦး သည် ဖားများ ကြွက်များကို အရှင်လတ်လတ် မြိုချတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလိုမြိုချပေးခြင်းဖြင့် သူ၏ အူလမ်းကြောင်း နဲ့ ပတ်သတ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Jiangxi ပြည်နယ်က Jiang Musheng ဆိုသူကလဲ ၀မ်းရောဂါ နှင်. ချောင်းဆိုးရောဂါ အား အသက် ၂၆နှစ်အရွယ်မှ စတင်ကာ နာတာရှည် စွဲကပ်နေခဲ.ပြီး။ ယခု Yan Dingcai ရဲ. ကုထုံး ကို စမ်းသပ်ကြည်.ရာ သူ၏ ရောဂါများ လုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားတယ်လို.ဆိုပါတယ်။ “အစကတော့မစားရဲ ဘူးပေါ့ နောက် တော့တကောင်စ နှစ်ကောင်စ စမ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာ” တဲ့..၊
“ကြွက်အရှင်ပေါက်စ လေးတွေ၊ အစိမ်းရောင် သစ်ပင် ဖားလေးတွေ ဟာ လူရဲ့ အစာကို အလွယ်တကူ ကြေစေနိုင်ပြီး။ တခါ ကဆို ကျွန်တော် တရက်ထဲနဲ့ ကြွက် အကောင် ၂၀ လောက် မြိုချဖူးပါတယ်။” လို့ Jaing က ဆိုပါတယ်။